Nyocha vidiyo na nyocha nke Weimei We Plus | Gam akporosis
Urua m nyere ebugharị na mbido mbụ nke Weimei We Plus, smartphone ọhụrụ sitere na aha ọhụrụ Spanish nke dị na egbugbere ọnụ onye ọ bụla. N'ime otu igbe ahụ nke m nyere gị echiche mbụ m banyere ngwaahịa a, a kpọkwara m gị ka ị tụleghachi ma nyochaa otu ọnụnọ ahụ mgbe emere ule ndị ahụ dị mkpa ma were m ebe niile na-enye ya nnukwu okpete iji hụ otu ọ na-arụ ọrụ na-akpa àgwà na ndụ n'ezie. ma ọ bụrụ na ọ bụ ọnụ kwesiri ekwesi ebe a na Androidsis.
Oge nkwa ahụ eruola ma taa bụ ụbọchị m na-eweta nke a nyocha vidiyo na nyocha zuru oke nke Weimei We Plus, a ọnụ na dị ka nhụchalụ nke ihe ebe a, na otu post na vidiyo ị ga-enwe ike ịgụ ma jiri anya gị hụ, enwere m ike ịsị na ọ jidere m kpamkpam, ịbụ taa otu n'ime ọdụm kachasị amasị m nakwa na m ji obi m niile na-agwa ndị enyi m na ndị enyi m niile na-ajụkarị ndụmọdụ maka nke dị mma, dị mma ma dị ọnụ ala gam akporo iji zụta.
1 Nka na ụzụ nkọwa nke Weimei We Plus
2 Ihe kachasị mma nke Weimei We Plus
3 Kasị njọ nke Weimei Anyị Plus
4 Weimei We Plus igwefoto ule
Nka na ụzụ nkọwa nke Weimei We Plus
Nlereanya Anyị gbakwunyere
Usoro njikwa Android 5.1 Lollipop n'okpuru WeOS nhazi akwa
Ihuenyo 5'5 "SuperAMOLED nwere mkpebi HD (1280 × 720 pikselụ) 320 dpi na Corning ozodimgba iko 3 nchedo
Nhazi Mediatek MT6753 ARMCortexA53 64-bit na isi asatọ na 1 Ghz
Nchekwa n'ime 32 GB gbasaa site na MicroSD ruo 128 GB kachasị ike
Igwefoto na-aga n'ihu Samsung 13MP CMOS S5K3M2XXM5 sensor nwere lenses 6 - oghere dị anya ƒ 2.0 - Nchekwa onwe na 0.1 sekọnd -HDR - Ultra Pixel - FullHD 1080p ndekọ vidiyo na 30fps - FlashLED - Mkpebi kachasị nke foto 9312 × 6976 pikselụ.
Igwe n'ihu Samsung 5MP CMOS sensor - Mkpebi foto max. 1920 × 2560 pikselụ -Aperture ƒ 2.2 - HD 720p video ndekọ
Njikọ Dual SIM 4G (Nano-SIM / Micro-SIM) - 4G TDD LTE: Bands 38/39/40/41 - 4G FDD LTE: Ndị agha 1/3/7/20 - 3G HSPA +: Ndị agha 1/2/5 - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - Wi-Fi a / c / b / g / n - Wi-Fi Direct - Bluetooth 4.0 - USB Type C - GPS / A-GPS / GLONASS - FM Radio.
Atụmatụ ndị ọzọ Brightness Sensor - Idi nso - Accelerometer - eCompass - Gyroscope - 3 Agba Ikanam --ma Ọkwa - Nkagbu Noise na Igwe okwu Secondary.
Batrị Na-enweghị ewepu 3150 mAh na Ndenye Ncha 5V2A Intelligent Batrị kachasị na Oke Ọnọdụ.
Akụkụ X x 151.9 74.6 4.1 mm
Ibu ibu 145 grams
Ahịa 289.99 Euro na ya website
Ihe kachasị mma nke Weimei We Plus
Kedu ka ị ga - esi hụ na nyocha vidiyo sara mbara nke ihe karịrị 35 nkeji nke m na - egosi gị ihe niile na - atọ ụtọ na njedebe gam akporo a nke Spanish na - enye anyị, nke a Weimei Anyị gbakwunyere ọ bụghị naanị na-anọchi n'ihi na ya Ngwakọta ngwaike na ọnụahịa na site na ihe a ga-atụ anya ya site na akụrụngwa dị mma, ọ bụghị site na ha Emechara na imewe ka dakọtara, nakwa na ha enweghị ihe ọ bụla nwere anyaụfụ na ihe ndị a na-akpọ ọkọlọtọ nke nnukwu ndị nrụpụta nke gam akporo smartphones.
Ebe n'ezie na-anọchi Weimei Anyị gbakwunyere, Ọ bụ na arụmọrụ dị ukwuu na ngwakọta nke ngwongwo a na ngwugwu kachasị dị elu na-enye anyị, jikọtara ya na akụrụngwa akụrụngwa dị mma nke na-ege ntị maka izu oke, ekele dị ukwuu maka sistemụ arụmọrụ ya nke aka ya, ya bụ, dabere na Android Lollipop na ha na-ama enen update ka Android 6.0 Marsmallow, nke n'okpuru aha nke WeOS na-enye anyị ahụmịhe ọhụụ nke Android maka otu n'ime usoro kachasị mma nke onwe m na-ahụtụbeghị mbụ na njedebe gam akporo. na ebe arụmọrụ na ịrụ ọrụ siri ike, niile na-enweghị ida ngwa ma ọ bụ ọrụ nke anyị ga-eme ka anyị nwee ịhụnanya site na oge mbụ anyị pịa bọtịnụ Ike nke Weimei We Plus.
Na usoro nke ya na-akpali akpali SuperAMOLED ihuenyo na, ọ bụ ezie na ọ na-anọgide na mkpebi HD 1280 x 720 pikselụ nke ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịdị ka ọ zughi oke. Dị ka echiche nke onwe m na ahụmịhe onye ọrụ m biri na nke a gam akporo ọnụ, echere m na ọ bụ mkpebi siri ike karịa nke na-enye anyị ezigbo ahụmịhe gbasara ịgụ ma ọ bụ igwu egwu ọdịnaya na egwuregwu, na-enweghị iru nke ahụ ma ọ bụrụ,, igba obara obodo kwụụrụ nke batrị dị ka a na ihuenyo na FullHD mkpebi ma ọ bụ elu amuma na-aghọ otú fashionable n'oge na-adịbeghị na na ọtụtụ obodo kwụụrụ nsogbu na-eme ka ọnụ na ha ha ike ga-eme.
Banyere ya 1,3 Ghz asatọ-isi Mediatek processor, ya Mali T720 GPU na ya karịa ezu 3 Gb nke RAM ebe nchekwa, ha karịrị nkọwa zuru ezu nkọwapụta nkọwa, karịa ihe m ga-asị, ịkwaga HD mma nke SuperAMOLED ihuenyo na mbipute nke gam akporo 5.1 Lollipop nke na-abịa na mbụ na Weimei Anyị gbakwunyere, na m pụtara Oghere Usoro ahụ, ebe ọ bụ na anyị kwadoro ya nke ọma Ha na-arụ ọrụ ugbu a na ụdị ọhụrụ nke WeOS na gam akporo 6.0 Marshmallow.
Iji mechie ihe ọma niile Weimei We Plus na-enye anyị, ana m ahapụ gị n'ụdị igbe ozi a nke ị hụrụ n'okpuru usoro ndị a, ebe m na-agbakwunye njirimara niile ma ọ bụ arụmọrụ nke ihe atụ a pụtara. Gam akporo ama na Spanish ekpomeekpo.
Mmetụta WeOS oyi akwa
Onwe mma ngwa
Ezigbo batrị obodo
Kasị njọ nke Weimei Anyị Plus
Ọ dị obere na achọtara m onwe m n'ọnọdụ ịnwa ike iji chọta ihe na-adịghị mma gbasara njedebe gam akporo nke ọtụtụ ndị m na-enyocha ebe a na Androidsis, nke a bụ ihe mere m mgbe m nyochachara nkọwa teknụzụ na arụmọrụ nke a nwere nyere m Weimei We Plus na, maka m bụ ọnụ nke kachasị nwee ntụkwasị obi na enwere m obi ụtọ ịnwale n'onwe m. Ọ bụ ezie na itinye ụfọdụ ihe ndị ọzọ, na enweghị ike ịdọrọ ihe ọ bụla na-adịghị mma m chọtara, ekpebiri m ịza ajụjụ ụfọdụ nke arụmọrụ ma ọ bụ nkọwa nwere ike ịbụ ọkọlọtọ yana, ọ dị nwute, etinyeghị ha na Weimei We Gụnyere.
Otu n'ime arụmọrụ nke Weimei We Plus nwere ike ịgụnye na nke ahụ bụ nkọwa nke ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo chọrọ, enweghị obi abụọ ọ bụla. enweghị onye na-agụ mkpịsị aka, ihe ejiji na ejiji n'oge na-adịbeghị anya mana nke m na-echeghị banyere enweghị ya.
N'aka nke ọzọ na ịkwụsị ihe gaara abụ Weimei We Plus, ọ bụ ezie na agwalarị m gị na maka SuperAMOLED ihuenyo HD mma karịrị nke zuru oke, ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo na-achọ ngebichi na mkpebi kacha nta, yabụ Mpekarị Pikselụ 1920 x 1080, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, a na ihuenyo na FullHD mkpebi dịkarịa ala.
Ihuenyo na-anọ na mkpebi HD
Ofu na-adighi ewepu batrị
Weimei We Plus igwefoto ule
Weimei Anyị gbakwunyere
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Anyị na-anwale Weimei We Plus, Spanish smartphone na adịchaghị emecha nke bara uru ịmara
Clinlọ ọgwụ, ụlọọgwụ ... Nuru, cookaaa !!
Egwuregwu ọzọ nke China na ọnụahịa Europe, dị ka BQ na naanị ihe ha na-enye bụ ikike afọ 2 na-adịghị arụ ọrụ. Ecoo e04 yiri nnọọ ma na-efu 75% obere.
Dịka ọmụmaatụ, ị hụbeghị ihuenyo nke ekwentị a ma ọ bụ hụ ọkwa ya na njedebe ma ọ bụ jiri ya kwa ụbọchị ma hụ ọrụ ọ na-enye.
M na-ekwuputa onwe m na m na-ekwu na ọ bụ otu n'ime igwe ntanetị kachasị mma na enwere m nnukwu ọ andụ nke nnwale yana enwere m obi ụtọ dịka dwarf na akwa akwa nke WeOS, ngwa ya ma ọ bụ arụmọrụ nke ọ na-abịa dị ka ọkọlọtọ .
Ejila ya n'ụzọ na-ezighi ezi, enwere m mmasị na nyocha gị. Mana n'okwu a, ekwenyeghị m gị. E wezụga imecha, nke m na-enweghị obi abụọ dị mma, ihe nhazi a, dị ka Ecoo, nke m nwere, nwere nsogbu ikpo ọkụ na igwefoto adịghị ọnụahịa ahụ. Mkpebi ihuenyo ahụ, ọ bụ ezie na a na-asọpụrụ ya, abụghị FullHD na nke ahụ doro anya, na 5.5, na-enyere aka na ndụ batrị mana ọ ka nọ n'etiti etiti karịa na etiti dị elu.
Anọgidere m na-esi ọnwụ na ụgwọ ahụ ezighi ezi. Echere m na Redmi dee 3, belụsọ ma nkwa ahụ, na-efu € 100 pere mpe ma bụrụ nhọrọ ka mma.
Ndewo Luis, Agaghị m ewere ya n'ụzọ na-ezighi ezi, nke bụ eziokwu bụ na onye nhazi a anaghị ekpo ọkụ ma ọlị na ọdụ a maka eziokwu dị mfe na ha agbadata ọsọ ọsọ ọsọ kacha na 1,3 Ghz kama 1.5 Ghz. N'aka nke ọzọ, ewerela m akwụkwọ redmi 3 maka ihe karịrị otu ọnwa na ọkara ma ọ bụrụ na ị nye m nhọrọ, m ga-ahọrọ nke a.
Obi siri m ike na ọ bụrụ na ị gosipụta nke ọma ya, ị ga-ekwenyere m.
N'ime ọnụego ahụ, m gaara etinye USB-c ma chọọ FullHD (enweghị mgbaghara), onye na-agụ akara mkpịsị aka na Snapdragon 808 ma ọ bụ Helio X10.
Banyere ọnụ ndị ị na-egosi m, Huawei P8 doro anya n'ụzọ ka mma n'ụzọ ọ bụla belụsọ na oyi akwa nke onwe m na-ahọrọ WeOS a nke hụburu m n'anya site na mbido, ihe ọzọ bụ, ihe mbụ m na-eme mgbe niile ịnwale ihe gam akporo ohuru bu iji tinye Google Now Launcher na nke a Weimei We Plus m gara n’ihu na nhazi mbụ ya na echeghị m banyere ịgbanwe ya ọbụlagodi otu oge.
Banyere BQ, enwebeghị m ike ịnwale ya ka m hapụ inye gị echiche m. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m nwalere Xiaomi Redmi Rịba ama 3, ụdị 3 GB nke RAM na Weimwei We Plus na-enye gị okpete n'ụzọ ọ bụla, arụmọrụ, mma ihuenyo, njikwa RAM ma ọ bụ ọbụlagodi ndụ batrị.
Tojupụtara n’elu ibe ya iji mepụta nnukwu ụlọ elu nwere Stack site na Egwuregwu Ketchapp